I-Bella Royal • Ukuthanjiswa komzimba ne-NuRu Massage
Hlikihla umzimba UNuru Slide
Muva nje uthuthelwe e-LA usuka eSan Diego !!
Ngilandele ku-IG ukuthola izibuyekezo zansuku zonke: @simphiwedana
Ukuhlanganiswa kweBelizean / kwaseJapan
Smooth baby isikhumba esithambile KONKE kwemvelo
Okunconyelwe kakhulu ukumamatheka kwami ​​okuhle, ukubuyela emuva okuqinile okuyindilinga, namabele amabele wemvelo.
Zonke izithombe zami ZIMI futhi zamuva !!
ZONKE izinsiza ezitholakala kuwebhusayithi yami
“I-Nuru massage ingaphezulu kwe- ukubhucungwa okungajwayelekile isipiliyoni, esihlukile ekubhucabheni kwakho okujwayelekile. Umzimba wayo onqunu ovusa inkanuko ukufudumala komzimba ngokushaywa ngamabomu nokugconwa kuzo zonke izindawo ezizwelayo ezilungile. Okwami Nuru ukubhucungwa kungenxa yendoda noma umbhangqwana ojabulela ukuphulula izinkanuko kancane ukuqinisekisa ukuthi wonke umzimba wakho uphulwe ngokuphelele futhi wanakekelwa ngokukhethekile. Kungubuciko bokuthi umzimba wami ujikeleze okwakho ngokuthinta kwami ​​okubucayi njengoba umoya wami ofudumele wokuthinta ubuza ukuthi ufuna okuningi. Kungokuhlangenwe nakho engikuthola kunzima ukukuchaza kanjalo… WOZA NGIJOLE NAMI !!! ”
Monday: Ngo-11: 00 AM – 11: 00 PM
NgoLwesibili: Ngo-11: 00 AM – 11: 00 PM
ngoLwesithathu: Ngo-11: 00 AM – 11: 00 PM
ULwesine: Ngo-11: 00 AM – 11: 00 PM
Friday: Ngo-11: 00 AM – 11: 00 PM
NgoMgqibelo: Ngo-11: 00 AM – 11: 00 PM
NgeSonto: Ngo-11: 00 AM – 11: 00 PM